कामरेडको नाममा खुल्लापत्र
pacific salmon 3182 days ago
More by demoqwasi
Is she honest? Should we support her?
Look how our great leaders are making new Nepal
Murderer under Government's Protection, What can Nepal Police do anything about him.
Visitor is reading swiss watch found in 400 year old chinese tomb
Visitor is reading Men are better frens
Visitor is reading florida international university
Visitor is readingaNepali language learning iphone application for Kids is av
Visitor is reading Nepali Best Movie Ever......
Posted on 04-30-09 4:59 PM Reply [Subscribe]
Source : http://www.hamroblog.com/?p=1886#more-1886 .. Just wanted to share it here..
थारुहटको आन्दोलनको कारण नागरिक त्राहिमाम छन । हिजोसम्म एक मुठा साग किन्न सक्ने नागरिकको हालत पलता भइसकेको छ । बन्दका कारण न गाडिमा हाल्ने तेल सहज बनेको छ त खाने तेल नै सहज बन्न सकेको छ । तराइका २२ जिल्ला बन्दका कारण नागरिकको भान्छाको वजेट डामाडोल भएर उनीहरु हैरान छन । तर कामरेडको बाहुल्यता रहेको सरकार भने एकोहोरो कटवालको केसमा मरिहत्ते गरेर लागेको छ । तिम्रा चासो कटवाल हुनसक्छ किनकी तिम्रो भान्छामा इच्छाएको पकवान पाक्छन । पेट्रोल हाल्न तिमि ५ घन्टा लामो लाममा तालु तताएर बस्नुपनि पर्दैन । तर,हामीलाइ हेर त कामरेड हाम्रा दुख कहिल्यै तिमिले भोगेका छौं तिमि केवल आफ्नो स्वार्थसिद्ध गराउन फेरी हाम्रै दुहाइ दिएर हिडेका छौं । नागरिक सर्वोच्चताको दुहाइ दिएर आफ्नो एकल सर्वोच्चता स्थापनाका लागि मरिहत्ते गरेका छौं । भनेपछि यो देशको नागरिक भनेको तिमि र तिम्रा वरिपरी तलुवा चटनीका लागि घुमिरहनेहरु मात्र हुन त ? के ति बाहेक हामी सबै अनागरिक ?
इन्धन ठप्प बराबर बनिसकेको छ । साग मुठाको ५ रुपैंयावाट १५ पुगिसकेको छ । ग्यासको अभाव शुरु भइसक्यो । काठमाडौंवाट बाहिर जाने नागरिक काठमाडौंमा अलपत्र छन अनी काठमाडौं भित्रीने नागरिक विच सडकमा अलपत्र परेका छन । तर नागरिकको सेवाको नारा अलाप्ने तिमि र तिम्रा सरकारमा मन्त्री कानमा तेल हालेर बसेका छन । तिमि र तिम्रा आसेपासे केवल कटवाल कटवाल भनेर रट लगाइरहेका छन । यो जत्तिको विडम्बना अरु के हुनसक्छ कामरेड ?
भान्छाको चिन्ता एकातिर, अर्कोतिर कुन बेला कु हुने हो ? अनी हिड्दा हिड्दै विच सडकमा कुन चै गोलिले इहलिला समाप्त हुने हो भन्ने चिन्ताले नागरिक त्राहिमाम भएको पनि २ साता पुग्न लागिसकेको छ । जताततै कु को हल्ला छ । कोही सेनाको कुको आतंकमा छन त कोही राष्ट्रपतिको । कोही लौ माओवादीले जनसेना लगाएर सत्ता कब्जा गराउने भो भन्ने त्रासमा छन । नागरिक तनावमा छन । तिमिले सधै अलाप्ने राग सर्वहाराका हुन । अहिले तिम्रा त्यही नाराका पि्य वर्गको भान्छाको टिन चामलविहिन बन्न पुगेको छ । तिमि बालुवाटारवाट बाहिरिए सर्वहाराको कोठामा छिरेर सोध त चामल कि कटवाल भनेर ? उनीहरुवाट जे निर्णय आउंछ त्यही अनुसार के तिमि काम गर्न सक्छौं ?
यदी तिम्रो सरकार नागरिकको हितको पक्षमा हो भने यसको पहिलो चासो कटवालमा हैन बन्द रहेको तराइका २२ जिल्ला खोल्नमा हुन्थ्यो । जसको प्रभाव आम नागरिकसम्म पुग्थ्यो र उनीहरु सरकारप्रति कृतज्ञ हुनेथिए । भान्छाको वजेट योजना अनुसार चल्ने थियो । इन्धन अभाव हट्ने थियो । त्यसपछि कटवालको केसमा लागेको भए केही जनसर्मथन पनि बटुल्न सक्थ्यौं कि । तर तिम्रा सरकारलाइ यो के को चासोको विषय भयो र ? तिम्रा लागि सागको ५ भएपनि ५० भएपनि तिम्रो भान्छामा पाकिहाल्छ । चढ्ने गाडि तेल भएन भनेर कहिल्यै रोकिएको छैन । तिम्रो भान्छामा इच्छा अनुसारको पकवान पाक्छ नै । यदी यही नै नागरिक सर्वोच्चता ? हो भने हिजो महेन्द्र शाहका पालामा भोकाएका नागरिकले-सरकार भात खान पाइएन’ भन्दा दुध भात पनि खान पाएनौ ? भने जस्तै तिमि र महेन्द्रमा के चै फरक भयो र ?
तिमी बालहठमा लागेर सेनाले कु गरे गरोस यत्रैसिती कटवाललाइ चै छोडिन्न भनेर लागेका छौं । तिम्रा लागि ति सामान्य हुन । कारण हिजो नागरिकका छोरालाइ बन्दुक बोकाएर तिमी भारतमा मोज लुटेर बसेकै हौं । भोलि पर्यो भने तिमि लाग्नेपनि त्यत्तै त हो नी । अनी मर्ने उही हिजोका झै नागरिक । जसलाइ तिमिले मुक्तीको नारा दिएर विष भरिएको ललीपप दिएर मैदानमा मर्नका लागि पठाउने छौं ।
त्यसको मार पर्ने नागरिकलाइ नै हो । जो फेरी तिम्रा मुक्तिकामी लाल आतंक अनी संरक्षणकामी सरकारी फौजको चपेटामा पर्नेछन । यसमा तिमिलाइ के चासो ? लाल आतंक रक्षक तिम्रा गुलामीमा सधै हाजिर भइहाल्छन । अर्को सेनाका उच्च हाकिमहरु पनि भोलि पुन सत्तामा आए भने अप्ठ्यारो पर्ला भनेर चाकरीमा लागि हाल्छन । तिमिलाइ त द्धन्द्ध चर्किएर के भयो र ? थप दुबै हातमा लड्डु । द्धन्द्ध चर्काएर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने जो तिम्रो घातक रणनीति छ । त्यो रणनीति सफल बनाउन तिमि आफु र आफ्ना परिवार बाहेक सबैको बलिदान दिन तयार रै छौ नी हैन ? तिम्रो बालहठले पुष्टी गरिसकेको छ कामरेड तिमि नागरिक सर्वोच्चताका लागि हैन आफ्नो सर्वोच्चताका लागि यि सबै नौटंकी गरिरहेका छौ । जसले तत्कालका लागि तिमि हिरो झै हौला तर इतिहासको पानामा दक्षिण एसियाको पोलपोट बनौला है ? होस गर ।
Posted on 04-30-09 7:03 PM Reply [Subscribe]
तिमि बालुवाटारवाट बाहिरिए सर्वहाराको कोठामा छिरेर सोध त चामल कि कटवाल भनेर ?
साह्रै मन छुने कुरा गरेउ है साथी। सबै ले यस्तै गरी कहिले बुझ्ने होला खोइ?